धाराको टुटी खाने प्रविण, तीनपटक सुधार गृह बस्दा नि छुटेन बानी
Tue, Jul 17, 2018 | 01:44:42 NST
20:08 PM ( 11 months ago )
Total Views: 51.8 K
काठमाडौं, साउन २३ – ललितपुरको कुसुन्तीमा प्रहरी इन्काउन्टरमा परेर लागु औषधको कारोबारी भनिएका एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ । सोमबार दिउँसो झण्डै २ बजेतिर प्रहरी इन्काउन्टरमा परेर ललितपुरको कुसुन्ती घर भएका प्रविण खत्रीको ज्यान गएको हो ।
३२ वर्षे खत्रीलाई गोली लागेर गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो । पाटन अस्पतालका डाक्टरले खत्रीलाई मृत घोषित गरेका थिए ।
केही दिनअघि अपराध महशाखामा सूचना आएको प्रविण खत्री लागु औषधका कारोबारी हुन् । उनीसँग पेस्तोल पनि छ । छरछिमेकलाई दुःख दिने गरेका छन् । सूचना पाएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गोप्य रुपमा उनीमाथि निगरानी बढाएको थियो ।
खत्रीको लाकेशन पत्ता लगाउन सोमबार बिहान ६ बजे नै अपराध महाशाखाको टोली कुसुन्ती क्षेत्र पुगिसेकेको थियो । हतियार देखाएर रकम समेत असुल्ने गरेको सूचना पाएको प्रहरीले खत्रीको घर पत्ता लगाउन केही समय लागेको थियो ।
खत्री घरमै रहेको र उनको साथमा दुई वटा पेस्तोल समेत भएको पत्ता लागेपछि गुलाबी रंग लगाएको खत्रीको घरमा झण्डै सवा दुई बजे अपराध महाशाखाको टोली पुगेको थियो ।
‘खत्री घरभित्र कोठामा पेस्तोल लिएर बसेका हामीले पनि उच्च सर्तकता अपनाउनु पर्ने थियो’ एक प्रहरीले भने । ढोका खोल्न केही बरे आग्रह गर्दा पनि खत्रीले ढोका खोलेनन् । ढोका खोल्नुका सट्टा उनी पछाडिबाट हाम फालेर प्रहरीतर्फ फायर गर्दै भागेको अपराध महाशाखाका एसएसपी दिनेश अमात्यले बताउनुभयो ।
उनी साढे दुई तल घरको कौशीबाट हाम फालेर पद्म कोलोनीतर्फको खुल्ला चौरमा पुगेका थिए । प्रहरीका अनुसार लागु औषधका कारोबारी भनिएका खत्रीले चौरमा पुगेपछि फायर गरेका थिए । जवाफमा प्रहरीले पनि फायर गरेको थियो । दुईवटै हातमा पेस्तोल बोकर भागेका खत्रीले आफैले कन्चटमा गोली हानेर आत्महत्या गरेका हुन् वा प्रहरीको गोली लागेर उनको ज्यान गएको यकिन हुन सकेको छैन । प्रहरीले भने खत्री आफैले मानसिक तनावमा आएर कन्चटमा आफ्नै पेस्तोलले गोली हानेको र ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
गोली लागेर गम्भीर घाइते भनिएका खत्रीलाई प्रहरीले आफ्नै भ्यानमा हालेर पाटन अपताल पु¥याएको थियो । अस्पताल पु¥याए पनि डाक्टरले उनलाई मृत घोषित गरे ।
हतियार लिने प्रहरीको उद्देश्य
दुईवटा हतियार रहेको थाहा पाएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले उनको हतियार लिने र कानून बमोजिम कारबाही गर्ने उद्देश्यसहित प्रहरी टोलीको खत्रीको घर पुगेको थियो । ३० वर्षे प्रविण खत्री लागु औषध कारोबारी भन्दा पनि लागु औषध दुर्व्यवसनी भएको छिमेकी बताउँछन् । उनलाई केही समय पहिले लागु अषौध नियन्त्रण व्यूरोको टोली लागु औषध दुर्व्यसनी भएको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका उनलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा उपचार गराउन भन्दै छाडेको थियो । उनी पुनर्स्थापन केन्द्र नबसी आफ्नो पहिलेकै दैनिकी बिताउने गरेका थिए ।
अपराध महाशाखाले भने उनी आजभन्दा झण्डै १० वर्ष पहिले लागु औषधको कारोबारीमा पक्राउ परेको जनाएको छ । दुई÷दुई वटा हतियार खत्रीसँग भएकाले उनी हतियारका पनि कारोबारी हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ ।
के भन्छ परिवार ?
खत्रीका बारेमा परिवारका सदस्यको कुरा भने केही बाझिएको छ । मृतकका केही आफन्तले यसको सत्य तथ्य छानबिन हुन पर्ने माग गरेका छन् । मृतकका बुवाले यसमा प्रहरी दोषी भएको आरोप लगाउनुभएको छ । मृतकका आमाले भने आफ्नो छोराको आचारण पनि केही खराब भएको स्वीकार्नुभएको छ ।
को हुन् प्रवीण खत्री ?
प्रवीण खत्री लागु औषध दुर्व्यसनी भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी तीन पटकसम्म सुधार गृह नार्कोनन्मा बसेको लागु औषध नियन्त्रण व्यूरोका प्रमुख डिआइजी धिरु बस्न्यातले जानकारी दिनुभयो ।
सम्पन्न परिवारका व्यक्ति प्रविणले सुधार गृहमा बस्दा लागु औषध खान नपाएपछि सुधार गृहको धाराका टुटी खाएका थिए । धाराका टुटी खाएपछि उनको पेटको अपरेशन गरिएको थियो । अत्याधिक लागु औषध खाने खत्रीलाई लागु औषध नियन्त्रण व्यूरोले गएको असोज ६ गते परिवारको जिम्मा लगाएको थियो ।